5 -Dhacyada of Social Media — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
5 -Dhacyada of Social Media
post Guest ka Jessica Barefield
Ha igu bilaabi by siinta Afeef a. article Tani ma aha oo ku saabsan sida warbaahinta bulshada xun. Waxaa loo adeegsaday in si dhexdhexaad ah, iyadoo qaab wadnaha xaq u, waxay noqon kartaa wax la yaab leh. dhibcood ee qodobkan waa inuu caddeeyo qaar ka mid ah siyaabaha ay warbaahinta bulshada noqon kartaa pitfall ah nolosha Christian iyo in ay kugu dhiirinaynaa in aad baari qalbigaaga marka ay timaado isticmaalka warbaahinta bulshada iyo ka qayb qaadashada. Kuwani waa shan siyaabo in warbaahinta bulshada quudin karo hawadooda noo dembi miidhan.
1. Warbaahinta Social lumin kartaa waqti aad
Tani waa wax aan horey u maqlin, laakiin waxa mudan in cel-. Waxaanu xusuusiyay in Efesos 5:16-17 in maalmuhu shar bay leeyihiin, waana in aan ugu wanaagsan u isticmaasho waqtiga inoo siiyey. Ka fikir in mudo ah karin waxa aad la samaynayso halkii hubinta goobaha oo dhan. Inta ay sugeyso at ballan, waxaan samayn karin liiska dadka si ay u tukadaan oo ku saabsan phone, bixiyana kuwa daqiiqo oo dheeraad ah oo ku Tukan for our qoyska iyo saaxiibada. Dhab, hal mar ama mid kale, waxaanu wada nahay dambi ah faqri saacadood on Facebook maalintii oo marna ilaa furitaanka erayga Ilaah. Tan iyo markii ay daqiiqad kastana waa hadiyad ka timid Rabbiga, waxaa qiimo aad naftaada waydiiso, "Ma jiraan wax ka badan qiimo aan laga yaabaa in qarash aan waqti on?"Inta badan wakhtiga, jawaabta malaha waa haa.
2. Warbaahinta Social boosteejo ah oo ku siinayaa in aad fikir kasta
Waxaan qabaa midnimo ee dhajinta on warbaahinta bulshada kugu khayaanaan karaan fikirka ay OK tahay in boostada oo keliya ku saabsan wax kasta. Waxaan ka caban, waxaan si qarsoodi ah uted dadka, waxaan Ixtiraamdarro dadka ku amar, oo waxaynu odhan wax alla wixii aynu ka fikirto caanka ah, sida haddii aysan dadka dhabta ah. Oo waxaan rumaysan nahay aynaan runtii ma u leeyihiin in ay ka jawaabaan wixii waxaa ka mid ah. Ha lagu siri by gaarka ah ee aad qolka hadda-waxaa jiri doona wax aan jirin gaar ah marka aan ka taaganahay Ilaaha nool ka hor iyo I sii xisaabtii for hadalkayaga. Matthew noo digtay quruxsan bayaan, "On maalinta xisaabta, dadka xisaabtami doonaa, waayo, Eray kasta oo si taxadar la'aan ah ayay ugu hadli. "Aynu wax Xasuusataan of this digniin marka xigta waxaan u cusbooneysiin our xaaladda.
3. Warbaahinta Social Kor U Qaadi Karaa qanac
Markii aan waqti la dheereeyey qaataan shubtay in ka badan waxa ay dadka kale ay qabanayaan oo waxay ku yidhaahdeen, waxa ay barbaro galeen in wax walba aan ku aadan haysan ama waa la soo baxay la waayay on aannu ogaanno. Waxaa noo keeni kartaa su'aasha ah sababta nolosheena ha isku mid ma uu fiirin. Muxuu waxaan qabaa of quote in? Waxaan jeclaan lahaa inaan iyada dareen style. guriga ay cusub waa hab ka weyn annagaa! Haddii annagu uma baahnin, soddon daqiiqo on Facebook ama Pinterest tegi karo aad dareen xumeyn, qurux badnayn, iyo underwhelmed la naftaada. Cibraaniyada na ku dardaarayaa, "Noloshaada aan lacag jeclayn lacag Hayso, iyo content leh waxa aad noqon, waayo, wuxuu ku yiri, 'Waxaan marna aad ka tagto doono, mana idinka tegi.' "Ugu danbeyn waxaan content la nolosheena sida Mu'miniinta noqon kartaa sababtoo ah waxaan siiyey in dhamaan waxaan u baahan nahay in Masiixa. Is weydii haddii aad isticmaalka warbaahinta bulshada waxaa caawiyay aad runta rumaysan this.
4. Warbaahinta Social kibir Kor U Qaadi Karaa iyo sii aad hoosta diiradda
Warbaahinta Social si deg deg ah noqon kartaa podium gaar ah is-horumarinta. Waxaan leenahay si aad u weydiiso nafteena waxa run ahaantii our dhiirogelin waa for dhajinta wax alla wixii aannu samayn. Ma waxaan raadinaya naxariis ama ammaantaada? Ma waxaan rabnaa in aan si fiican u maleeyay of ama ku faana waxyaalaha xiiso leh ayaan waxaan la samaynaya? Ha si joogto ah aad u hubiso sida badan "ciyaartoyda sida" ama "retweets" aad post helay? Dhammaan waxyaalahaas Kor kibirka iyo sii noo diiradda nafteena on. Tani waxay noqon kartaa pitfall ah gaar ahaan ku adag tahay qof kasta oo uu leeyahay boosteejo ah in ku koobnayn oo qura asxaabta iyo qoyska ay. Haddii aad samayn music ama waxay leeyihiin blog a caan, kaliya sababtoo ah kun oo qof ay dhagaysto macnaheedu ma aha wax kasta oo ku soo dhaca maskaxdooda waa qiimo ku leh. Waa in aan xasuusnaano in retweets, comments, iyo kooxaha aadan si toos ah u siin sharci waxa post. Ilaah arkaa dhiirogelin ee qalbigayaga iyo marna siri by post a iyo sidoo kale-gurato. Sida aan Samuel 2:3 ganaaxyada, "Ha sii hadlaya oo saas u kibir ama ha afkaaga ku hadli kibir sida, waayo, Rabbigu waa Ilaah wax walba yaqaan iyo camal isaga miisaama. "
5. Warbaahinta Social yaynaan kartaa view of xiriir
Waayo, wax kasta ka faa'iideysan warbaahinta bulshada ayaa xiriir, waxaa jira khasaare ah. Waa ay fududahay inuu la socdo kuwa idin jecel (waxaa laga yaabaa in aad u fudud?). Ha weli aad u qoto dheer leeyihiin, sheekaysiga macno in qofka? Waa ay fududahay in kor loogu hayaa dad badan oo aad u jecel-iyo dad badan oo aadan xataa ma oga (waxaa laga yaabaa in aad u tiro badan?). Ma waxaad oversaturated la faahfaahinta 300 nolosha dadka in aadan shaqo fiican oo jecel ah 10 dadka aad aragto usbuuc ka usbuuc? Waxaan si dhaqso ah u tababaraan kartaa nafteena in ay macaamiisha macluumaadka halkii kuwii ku caashaqi jiray dadka. Ogaanshaha ku saabsan qof ee nolosha wadaagaya iyo wax kasta oo ku saabsan nolosha gaar ah via warbaahinta bulshada la mid ma aha sida in ay saaxiib dhab ah. Dabcan Ciise waa tusaale kaamil ah oo ah waxa ay ka dhigan tahay inuu saaxiib la ahaado run. Sida Ciise baraa, "My amarka waa this: midba midka kale jeclaado sida sidaan idiin jeclaaday,. jacayl kan ka weyn ma laha mid ka badan tan, in uu naftiisa u bixiyo saaxiibbadiis. "Saaxiibtinimada waa ka badan wadarta updates xaaladda iyo sawiro. Saaxiibtinimada Waa allabarigii. Waxaa sita midba midka kale culaabta. Ma ahan oo kaliya magac-waa in la taaban karo.
Jessica Barefield ku nool Washington D.C. iyada Trip ninkeeda, iyo ina ay Q. Waxaad dambe iyadii ka akhriyi kartaa iyada blog, Waxeey jecel Si jeclaada.
Tani waa si run ah. Waxaan si cad u galin in aan baabba 'saacadood iyo saacadaha aan waqti iyo maalmo on warbaahinta bulshada iyo dhibcood oo dhan hore u keenay, Waxaan si toos ah la xidhiidhi karaa. Waan ogahay in aan maanka iyo qalbiga in aan doonayo in aan oo ay leeyihiin in ay u soo gooyay, ama aad bay u dhimin, laakiin ma fududa. Laakiin farriinta aad gaadhsiiyey iyo erayadii Ilaah tahay in aad la isticmaalayo in la xoojiyo si cad iigu. Waad ku mahadsan tahay this article :)
post Great! Runtii iga dhigay qabaa oo ka fiirso isticmaalka warbaahinta bulshada!
u qoran si aad u wanaagsan! Marna ku lug leh shabakadaha bulshada ilaa in yar ka badan sanad ka hor waa kuwan qaar ka mid ah sababaha. Waxaan dhab ahaan loo fekerayo tirka shabakadaha bulshada my in ay diiradda saaraan waxa loo baahan yahay in diiradda lagu saaray. Luudh dhibcaha wanaagsan halkan. Waad ku mahadsan tahay waqtiga aad qaadato si ay u qoraan iyo wadaagaan.
Wow! Si run. Waxaan si xaqiiqo ah u baahan tahay in ay ka shaqeeyaan on my qaadashada warbaahinta bulshada. Waxaa aad u gubaya mid ka mid ah sababaha aad u hesho Waxa aan joojiyay on Pinterest. Waad ku mahadsan tahay la wadaago.
Wax gaaban ee barakaysan
Waad ku mahadsan tahay wax badan for this dhajinta. Waxaan la qudhaydu dagaal ku saabsan helitaanka on Facebook. U muuqataa waayadan sameeyaa oo dhan waa ka dhigi waalan cadhooday. Tani waxa ay ahayd wax walba oo aan loo baahan yahay in la maqlo iyo akhriyo doonaa markii aan u baahan tahay inaad wax Xasuusataan. adiga iyo Trip ku mahadsan tahay. Ilaah ammaan.
Miishaa'eel • September 24, 2013 at 1:20 pm • Reply
Waxaad tahay waxyi ah! Sidaas dhibcood badan oo wanaagsan aad halkan. Ilaah aad xigmad in la fahmi karo iyo aad u khuseeya guud ammaana! :)
haa • September 24, 2013 at 1:48 pm • Reply
Waxaan la qalbiga laga wareemay by this qaybsiga awoodda badan. Waxaan aaminsanahay waxa aan helay oo dhan oo raba in meesha this. Trip Thanks iyo Jessica. Ilaah laga yaabo inay sii aad isticmaasho .
Kaaleeb • September 24, 2013 at 2:15 pm • Reply
Wax wanaagsan baad tidhi! Waxaan lahaa qaar ka mid ah fikradaha isku saabsan warbaahinta bulshada muddo sannado ah lacag ee la soo dhaafay. Ka dhig qoraal!
jidka • September 24, 2013 at 4:56 pm • Reply
Sidee baan waxan u jeclahay!!!! Sidaas si run iyo waxaan jeclaan lahaa dad badan fahamsan yahay dhibcahaas!
Themba • September 25, 2013 at 5:49 waxaan ahay • Reply
aad dhabtii tahay waxyi qarnigan. Wax wanaagsan baad tidhi!!!
Clara • September 26, 2013 at 4:27 waxaan ahay • Reply
Waad ku mahadsan tahay wax badan Jessica waayo, erayadanu waa in si run ah iyo xukun siiyey. Ilaah laga yaabo inay sii aad iyo aad guriga ku isticmaasho :-)
Waad ku mahadsan tahay this post Nuurin! Tani waa noo keento si uu u xaliyo indhahayaga ku Ciise iyo ka yar kuwa kale oo isku.
Awesome…. Ilaah ha ku ammaanmo oo keliya….
Waad ku mahadsan tahay si ka badan, waayo, “dad yar” la soo baxay cod u hadla lambarrada in ay ka fekeraan our “bulshada” Qiimaha waxaa laga warbaahinta bulshada. Thanks for toosiyaan call !
Taas waxaan u baahan yahay!!
Arrintaasna waa run. waqti qaali ah waxaan baabba 'on shabakadaha bulshada Dan la'aan, oo mar kasta oo ujeeddo ma aha dhulka, xadgudub waa lama huraan. Aniga qudhaydu waxaan i ahay eed of this at times; laakiin i baryayaaye Fadliga in la isugeeyey mudnaanta aan.
Caadiinna Moore • September 26, 2013 at 5:44 pm • Reply
Tani waa post a aad u fiican. Waad ku mahadsan tahay waxaa nala wadaago, riyaaqay waxa akhriska iyo waxa uu indhaha ii furan u dhacyada ee warbaahinta bulshada. :) Grace & Peace.
Yuusuf • September 26, 2013 at 6:03 pm • Reply
Dhab ahaan sababta aan si joogto ah la tirtiro aan Fakebook ee hore 2012. Sida sidee baan siiyey cable TV ee 2001, Anigu ma seegi midkood Fakebook ama TV. FB wax fudud in aad naftaada ku jeclahay, taas oo ah sanam. In on computer ah ee shaqada (video tafatirka) waa dhan sababta dheeraad ah sababta aan ma doonayo in aan waqti ku dul bixisaan, waqtigayga firaaqada ah, laakiin waa arin aad u fudud inay waqtiga ka dhumin on computer ah. Haddii aan ahay on YouTube, waxaa si aad u daawato dhisanto videos ka Masiixiyiinta kale. Waxaan aad ugu boorinayna Christian kasta inuu akhriyo maqaalkan: “Xirrira naftayada la Facebook” by Shane Hipps (Second Nature Journal DOT com)
Aad u maleeyeen xanaajin!
okay • September 26, 2013 at 6:41 pm • Reply
Wow, post weyn, Waxaan ahay dhab ahaantii la barakeeyey.
Omg waxaa si aan la xukumay toddobaadkii la soo dhaafay by dhab ahaan waxa aad ku tidhi …saacadood kharashka on facebook in la faqri hadalka! Waan jeclahay blog this…dhawraan ka aqoonta leh ee soo socda!
Waxaan jeclaan meel aad isku dheeli tiran; aan si buuxda u cambaareeyey warbaahinta bulshada, weli ku fiiqaya arrimaha / janjeera for Dambi,. I xasuusinaysaa iLove.
Rochelle • September 26, 2013 at 7:05 pm • Reply
points..thanks Good for sharing inaan u baahnaa .
Waad ku mahadsan tahay la wadaago! xusuusinta fiican oo ah sida ay tahay in aan digniin nafteena marka ay timaado warbaahinta bulshada.
Waad ku mahadsan tahay Jessica for this article & mahad aad safar for dhajinta on FB si aan u arki karin & yimaadaan si blog ah si ay u akhriyaan.
kor u qortaa Great! U maleeyay in xanaajin hubaal…ogow in ay is!
Wow! Tani waa cajiib ah! dhibic walba oo igu dhuftay oo runtii aan loo baahan yahay si ay u maqlaan. Waad ku mahadsan tahay si ka badan. Ilaah ha barakeeyo!
pink • September 26, 2013 at 9:23 pm • Reply
Waad ku mahadsan tahay wax badan, waana taas qoraal. Waa sidaas aad u xeeldheer oo ayaa I caawiyay wax badan in garashada in aan u baahanahay in la xadido waqtiga aan la warbaahinta bulshada. Qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha aad ku tilmaamay wax walba waxaan la xidhiidhi karaa waa. Waqti aad u badan on warbaahinta bulshada ma aha faa'iido ruuxayga aad blog ayaa runtii ku rid erayada ii. Mar kale mahad u badan
Kaalinta on tirada 4 ii. Mid ka mid ah si aad u daawato – mahad
Thanks for qoraal this article; article this ahaa ku dhisanto.
Clement Magombo • September 27, 2013 at 2:25 waxaan ahay • Reply
Ilaahay ha idin barakeeyo, waayo, taasu wadaago. Waxaan u baahan tahay inaad daahir ah oo maskax leh ee wax kasta oo aan samayn online / offline. Nimco iyo nabadu
KA • September 27, 2013 at 3:31 waxaan ahay • Reply
article Awesome! Well qeexeen iyo isku dheeli tiran. Thanks for sharing
Elton • September 27, 2013 at 6:18 waxaan ahay • Reply
Dambiileyaasha lagu eedeeyay on dhan 5 dhibcood…Waad ku mahadsan tahay this.
Adam • September 27, 2013 at 7:35 waxaan ahay • Reply
Maqaalkani waxa uu qabtay indhahaygu deg deg ah maxaa yeelay shaqada waa online iyo qayb weyn oo ka mid ah waa warbaahinta bulshada. Ka hor inta taasuna waxay ahayd shaqo gabi ahaanba aan la xidhiidhi kartaa this. Waxaa run ahaantii waxay noqon kartaa mid wax dumiya waqti hadii aan wax is-. Waa in aysan noqon wax soo dhawaaday si taxadir leh hubaal!
dhafeen • September 27, 2013 at 9:32 waxaan ahay • Reply
Waxaan arkay link this on my Facebook oo waxaa lagu saxibbadayda si ay u akhriyaan, maxaa yeelay waan ogaa waxa ay ii caddayn lahaa iyo maanta waxaan ku idhi, “Waayahay… Ha i leeyihiin.” lol. Just oo ku saabsan wax kasta oo halkan waa run ku saabsan sida aan waqti online qaataan oo waan tegayaa inaan u maleeyaan in qofka qoray maqaalkan ma posted this haddii ay aan la dagaallamay this nafteeda hab qaar ka mid ah. Sidaas darteed waa wax fiican in la ogaado in ay jiraan dad kale oo lagu qaado ama ma qaadaan culayska la mid ah. At kaniisad aad u muuqdaan in ay dareemaan sida aan waa in aad qirto in walax sidan, maxaa yeelay, waxaannu ku abuuray fikradda ah in mid kale ma jiro hardan adag la. Just maalinta kale oo aan la hadlay ninkayga iyo isaga u sheegay sida aan tirtiray apps qaar on my ipod (haa waxaan weli ipod ah oo aan iphone ah, by doorashada) maxaa yeelay waxa ay u abuuray fikir caafimaad qabin / kuwa aan cibaadada lahayn. Waxaan isticmaali inuu u ciyaaro Home Design meesha aad guriga ka abuuri kartaa riyadii iyo markeeda waxaan noqon lahaa si niyad leh guriga aanu ku nool nahay. Waxaan weli jecel ciyaaro Mall World on FB iyo qirtay inuu ninkayga aan jeclahay maxaa yeelay avatar waa qof Anigu ma ihi, iyadu waa quruxsan, caato, independant waana riyo aan ku raaxeysto oo ku nool iyada oo loo marayo. Waxaa laga yaabaa in aan ka dhawaajiyaan cajiib ama dadka waxay u maleynayaan aad u badan ayaan la wadaago laakiin tani waa xukunka u gaar ah. Waad ku mahadsan tahay xoojinta waxa aan ogahay by dembigaada gaar ah la noo qoraa iyo faaloodayaal kale la wadaago.
ChinaJohnson • September 27, 2013 at 11:44 waxaan ahay • Reply
Waxaan la tirtiro doonaa Facebook iyo Instagram in muddo ah. Tani waxa ay ahayd ka dib ilaa aan call. nimankooda My ayaa ii sheegin oo arrintan ku saabsan iyo qanac soo martay meel aad u fog! Waad ku mahadsan tahay Jessica!
lol tani waa si run ah.. nasiib wanaag, i soo saaro my account shabakadaha bulshada ku saabsan 3 sano ka hor :D
Yashuuca • September 27, 2013 at 9:59 pm • Reply
Taasi waa dhab! Helay igu thinkin!
RJ • September 30, 2013 at 6:21 waxaan ahay • Reply
Mahadsanid! qeybiso Waxaan ahay qaado nasasho dheer ka Facebook toddobaadka, Email, iyo Instagram iyo shaqada on xiriirka kuwa aan la dadkii aan arko in aan nolol maalmeedka leeyihiin.
Tyler • September 30, 2013 at 7:21 waxaan ahay • Reply
alaabtii fantastic! Waxaan ahay arday ku jira dugsiga sare iyo qayb ka mid ah oo ku saabsan gelinaya stock aad u badan galay retweets iyo jecla waa sidaas runta ah! Waxaan si xaqiiqo ah u malaynayaa in ay tahay wax wanaagsan in soo bixi karo ee Twitter / Facebook laakiin waa dhan oo ku saabsan meesha aad qalbigoodu waa!
THOMASSINGWA • October 3, 2013 at 12:51 waxaan ahay • Reply
Wow mahad Ilaah in la qoray ii,waase nolosha had iyo naxariisi korkiisa ha laga yaabaa in adiga iyo family.Trip ayaa had iyo jeer ninkii maalmood music The,writtens iwm xajiya awake.we ii Ilaah ugu mahad naqayaa, waayo, aad
Facebook Jimcaha free?! Igu soo biir! :P bisha oo dhan October!
Xusuuso: Waayo, jacaylka Lupe
Miranda • October 8, 2013 at 1:38 waxaan ahay • Reply
post fiican! warbaahinta bulshada waxay noqon kartaa wax yar ka badan, laakiin markii aan arko Naftooda gaari oo ay ku beeray galay kaniisad qoysaskooda iyo adeegaya kiniisadda iyo in ay bulshada la qoysaska.. Taasi waa cajiib ii.
Keinya • October 18, 2013 at 5:11 waxaan ahay • Reply
Wow. Tani dhab ahaantii ila hadlay oo waxaan u mahad celineynaa. Waxaa si fiican u caddeeyay oo uu leeyahay talo weyn ku saabsan siyaabaha ay u muujiyaan qaar ka mid ah. Mahadsanid!
Waad ku mahadsan tahay this dhajinta! sidaas farxi Ilaah ii horseeday in aad blog, maantana waxaan filayaa waayo waxaan loo baahan yahay in this akhri!
Waxaan jecel soo socda inuu ka blog this iyo akhriska oo dhan oo ka mid ah posts cabsi badanna ku sameeyey Trip iyo xaaskiisa. Ka dhig kor hawsha wanaagsan ee aad laba!!! Ilaah ha barakeeyo.
kaliya i siiyey aragti dheeraad ah oo aan ku fikiray i lahaa
Trip iyo qoyskiisa waa barakooyinka saafi ah.
TheMesenger • November 8, 2013 at 8:54 waxaan ahay • Reply
Taasi waxay dhacdaa mararka qaar sameeya ma ????
TheMesenger • November 8, 2013 at 8:51 waxaan ahay • Reply
Taasi waa sooooo run waxay qaadan kartaa waqti ka ilaah iska sidoo kale aan u muuqan doontaa in aad waqti u 4 isagii, oo waxaannu iska jar doonaa off ka dhigo waqtiga
Kat • November 17, 2013 at 12:05 waxaan ahay • Reply
akhrin laga cabsado. qireen, waqti aad u badan i qaataan eegaya wiilasha quruxsan iyo wax soo jiidasho leh iyo is kor loogu qaaday, kuwaas oo dhan wax maqaar saar on tumblr in i muuqdaan in Ilaah ku hardiyi ku leexan by. waxaa wax laga xumaado ah, wax murugo leh; i kor loo akhriyo karo eraygiisa, oo waqti dheeraad ah, isagaana leh….mahad furitaanka isha!
Wow. Waxaan u maleeyay in aan wanaagna wuu fali jiray, maxaa yeelay, waxaan ahaa kaliya on labadii shabag. Tani waxay hubaal iga caawiyay inaan naftayda ka fiiri. Waxaan u maleeyay, sababtoo ah waxaan ahaa ma dembaabtaan okay waxaan ahaa, iyo dabcan waxaa had iyo jeer waa laga sii fiicnayn.
ka qarin • January 30, 2014 at 10:29 waxaan ahay • Reply
Ilaahay ha idin barakeeyo, waayo, taasu wadaago iyo aad ugu mahad naqayaa! post Tani waxay uun helay igu fikirka ku saabsan waqtiga aan la warbaahinta bulshada iyo shabakadaha ay baabba '. Waxa ay iga caawiyeen in ay dib-u-qabaa waxa aan qabanayo waqti.
Anigu waxaan oggolahay inaan la dhibic kasta. Waxaan si dhab ah ayaa la iska ilaaliyo Instagram maxaa yeelay, waxaan arkay aniga oo is barbar aan is gabdhaha kale ee halkaa ku. Ma ahan wanaagsan si ay u dareemaan mid Gaalnimo Badan. Waxaan jeclahay inaan xayawaanka cute. lol
Waxaan ka fiirsaday tirka aan FB, Instagram xisaabay dhowr jeer. Waxaan qabaa inay u fiican tahay hayo ilaa xubnaha qoyska fog marka laga reebo in kastoo. :)
Qurxinta guriga • March 5, 2017 at 3:30 waxaan ahay • Reply
blog aad u fiican! Ha aad qabto wax talooyin iyo tilmaamo loogu talagalay go'neyd qorayaasha?
Waxaana ii qorsheysan inaan dhawaan bilaabi website aniga ii gaar ah, laakiin waxaan ahay wax yar ka lumay wax kasta oo.
aad soo jeedin lahaa in laga bilaabo boosteejo ah oo lacag la'aan ah sida WordPress ama u tagto xulashada ah ka bixisay? Waxaa jira fursado badan oo soo baxay waxaa aan gebi ahaanba la maansheeyey ahay ..
fikradaha kasta? Mahadsanid!